I-Raw Desoxymethyltestosterone powder (3275-64-7) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Series Testosterone powder Series / Desoxymethyltestosterone powder
SKU: 3275-64-7. iindidi: Series Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kulawulo lwe-Desoxymethyltestosterone powder (3275-64-7), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Desoxymethyltestosterone powder Ngomnye we-designer steroids ukuba athengiswe njengesicatshulwa sokwenza umsebenzi kubadlali bezemidlalo kunye nabakhi bomzimba, kufunyenwe ukuba abophe kwi-androgen receptor (AR) malunga nesiqingatha ngokukodwa njenge-DHT, kwaye kubangelwe imiphumo emibi efana ne-17α I-AAS ene-alty, njengobungozi besibindi xa kuthathwa kwi-dosages ephezulu kunye ne-hypertrophy ye-ventricular hypertrophy.
Desoxymethyltestosterone powder ividiyo
Desoxymethyltestosterone powder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-Desoxymethyltestosterone powder (DMT) powder
I-molecular Formula: C20H32O
Isisindo somzimba: 288.46
Umjikelezo we-Desoxymethyltestosterone powder
Amanye amagama: i-DMT, i-Pheraplex, i-DMT, i-Madol, i-Desoxymethyltestosterone / i-DMT, i-Madol powder, i-Pheraplex powder
Ukusebenzisa i-Desoxymethyltestosterone powder
Abasebenzisi baseMadol banokulindela ukuzuza ngokukhawuleza kwiindawo zabo zokunyuka kunye nokwandisa ukuzuza kwemisipha, ngaphandle kokugcinwa kwamanzi. Njengazo zonke i-anabolic steroids, incedo kwiprotein ye-protein, i-recovery, kunye nokwanda kweeseli ezibomvu zegazi (RBC).
Abanye abadlali ababandakanyeka ne-BALCO basebenzisa i-Desoxymethyltestosterone powder, ngaphezu kwezinye iimveliso, ukwandisa isisu kunye neziphumo ezineziphumo ezintle. Abadlali abachaphazelekayo kwi-BALCO (kwaye mhlawumbi babaleka eMadol) babeyi-MLB kunye neenkwenkwezi ze-NFL: I-Barry Bonds, uBill Romanowski, uJason Giambi; kunye nabadlali abaninzi beOlimpiki njengoMarion Jones.
Iyiphi imilinganiselo yeDoxyxymethyltestosterone powder
Umlinganiselo we-10-30mg ngosuku ukwahlula kwi-AM kunye ne-PM kuhle, kodwa ishedyuli yokuqaphela ngokucwangcisekileyo iya kuba yi-3 (ezintathu) ngamaxesha ngosuku. Ungadluli i-50mg ngosuku, njengoko kungenakudinganiswa nale ngxube enamandla. Kwakhona, akukhuthazwa ukuba udlule ii-6-8 kwiiveki kumjikelezo. Ixesha lokuqala I-Desoxymethyltestosterone abasebenzisi be-powder kufuneka baqhube i-15mg ngosuku, kwii-4 iiveki eziphezulu, ukuvavanya umphumo.
Lo ngumlomo we-hybrid, umjikelezo ojoyiweyo osekelwe kwi-Desoxymethyltestosterone powder ne-trenbolone:
Iveki iMadol Trenbolone
I-Acetate Cardarine N2Guard Proviron
Ubude bomjikelo wexesha:
Ukulinganisa (Kwi-Scale ye -5 ukuya ku-5):
I-Muscle Gain: + 4
Amandla Ukuzuza: + 3
Ukufumana i-Fat Gain (Ukungabonakali kubonisa ukulahleka kwe-Fat): + 1
Ukugcinwa kwamanzi: + 2
Inkcaso: + 2
I-Acne: + 1
Ukulahleka kweenwele: + 1
Ukwandiswa kweprostate: + 1
Ubunzima besibindi: + 3
Indlela i-Desoxymethyltestosterone powder isebenza ngayo
I-Desoxymethyltestosterone powder yenye ye-designer steroids yokuqala yokuthengiswa njengezixhobo eziphucula ukusebenza kubadlali nabadlali, ziye zafunyaniswa ukuba zibophe kwi-androgen receptor (AR) malunga nesiqingatha ngokukodwa njenge-DHT, kwaye ibangele imiphumo emibi I-AAS ye-17A-alkylated, njengobungozi besibindi xa kuthathwa kwi-dosages ephezulu kunye ne-hypertrophy ye-ventricular hypertrophy.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuba lunefuthe le-anabolic 160% ye testosterone, ngoxa i-60% njenge-androgenic kuphela. Umlinganiselo we-anabolic / androgenic ngu-1200 / 187. Ukongeza, iMadol ayinakuchothoza kwi-estrogen.
Abasebenzisi banokulindela amandla amakhulu okwandayo, ukufumana ubunzima, kunye nokucima. Ukuzuza ubunzima obuphezulu kwi-20lbs kwii-4-6 iiveki azivekanga ngolu hlobo. Imiphumo emibi yecala yomzimba iya kuba yimpompo eqinile yomsipha, ukuphefumula okufutshane, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isikhumba seoli, kunye nokuqhaqha. Ukuba abasebenzisi befuna ukunciphisa isichefu esiyingozi kwisibindi okanye ezinye iziphumo ezibi, i-DMT ingasetyenziselwa amaxabiso aphantsi njenge-10mg / ngosuku ngenxa yempembelelo efanelekileyo.
Ngenxa yokuba le ngqungquthela i-methylated, akufanele ifakwe kunye namanye ama-methylated compounds. Ukuba nomsebenzi ophantsi we-androgenic, i-DMT inokuchaphazela kakubi i-libido kunye ne-erectile function. Esi siphumo salo singasetyenziselwa ukubeka i-DMT kunye ne testosterone okanye enye ye-metabolites engeyona i-aromatizing yokugcina amanqanaba e-DHT.
Ngokuxhomekeka apho ukhangele khona, i-DMT ibiwe ukuba i-2-12 amaxesha aninzi kunye ne-0.4-2 amaxesha kunye ne-androgenic njenge-methyltestosterone. Kuye kucetyiswa ukuba i-DMT yinto eyenzekayo ngokwemvelo kuba inesakhiwo esingafaniyo kwi-delta 2-androstenol, i-pheromone eyenziwa ngokwemvelo kwizilwanyana ezincelisayo. Nangona kunjalo, ukuba i-hormone ye-17aa i-steroid yenza ukuba iguqule ngokweenkqubela kwaye ingaveli ngokwemvelo. Ngayiphi na indlela, ngoku igosa elilawulwayo e-United States.
I-Desoxymethyltestosterone I-powder Marketing
Ngaba i-Desoxymethyltestosterone powder Unayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Ngokuqhelekileyo, i-steroid yomlomo enamandla njengale nto yayiya kuba nemiphumo emibi, kwaye yile nzekayo nge-DMT. I-Madol yi-17alpha-alkylated ukukhusela i-compound ekubeni iphulwe phantsi kwesibindi, kwaye inokusenza impilo ye-cardiovascular (amanqanaba e-cholesterol ngokukhethekileyo). Kunconywa ukuba uqhube umbane wenkxaso-ncedisi ye-cycle-aid ezifana ne-N2Guard ukukhusela isibindi sakho nentliziyo ngexesha lemijikelezo. Iziphumo ezikhawulezayo zingaphinda zithetha ukukhathala nokulala, ngoko kubalulekile ukujikeleza eli qela kwiiveki ze-6-8. Ukongeza, le steroid iyancipha, ngoko kuya kufuneka ukuba unyango lwe-post post.
Indlela yokuthenga i-Desoxymethyltestosterone powder evela kwi-AASraw
Desoxymethyltestosterone Recipes Powder Recipes